Mudaharaad looga soo horjeeday maamulka Somaliland oo ka dhacay Bosaaso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Mudaharaad looga soo horjeeday maamulka Somaliland oo ka dhacay Bosaaso
Mudaharaad looga soo horjeeday maamulka Somaliland oo ka dhacay Bosaaso
February 25, 2011 - By: Abdirahman. A
Mudaharaad looga soo horjeedo maamulka Somaliland ayaa maanta ka dhacay magaalada Bosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Qaar kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Bosaaso ayaa galabnimadii maanta sameeyey banaanbax ay kaga soo horjeedeen maamulka Somaliland kuna cambaareynayeen dagaalka ay degaanka Kalshaale iyo degaanada kale ee gobolka Ceyn kusoo qaadeen Ciidamada Somaliland.
Dadka mudaharaadka dhigaayay ayaa isugu jirey Haween,dhalinyaro iyo Caruur waxaana ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah maamulka Somaliland.
Waxaa ay socod kusoo mareen waddooyinka magaalada oo ay kamid tahay waddada dheer ee laamiga,waxaana ay ugu baaqeen maamulka Somaliland in ay joojiyaan xasuuqa ay ku hayaan shacabka kunool gobolka Ceyn.
Mudaharaadka ayaa kusoo dhamaaday jawi degan iyadoo aanay dhicin wax rabshado ah,waxaana xusid mudan in dadka banaanbaxayay ay soo dhoweyeen hadalkii dhowaan kasoo yeeray Madaxweynaha Puntland.
Magaalooyinka ugu waaweyn ee Puntland ayaa asbuucyadaan waxaa ka dhacaayay banaanbaxyo looga soo horjeedo maamulka Somaliland oo ku aadan dagaalada ay kusoo qaadeen shacabka kunool gobolka Ceyn oo taageersan Dawladda Puntland.
Tagged With: Bosaaso, Gobolka Ceyn